आज धनतेरसको दिन के-के किनिन्छ ? Canada Nepal
आज धनतेरसको दिन के-के किनिन्छ ?
काठमाडौं - आज धनतेरससँगै हिन्दुहरूको दोस्रो महान् चाडको रूपमा रहेको तिहारले पनि पाइला टेको छ । यस दिन विशेष रूपमा भगवान् धन्वन्तरीको पूजा आराधना गरिन्छ साथै धनका देवता कुवेर तथा लक्ष्मीको पनि पूजा आराधना गरिन्छ । समुद्र मन्थनको क्रममा यसै दिन भगवान् धन्वन्तरी हातमा अमृतको कलश लिएर प्रकट भएका थिए ।
कार्तिक १६, २०७८ मंगलवार ०७:५९:३८ बजे : प्रकाशित